यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७७, मंगलबार
केपी शर्मा ओली :यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, मेरो भ्रमण टोलीमा संलग्न आदरणीय सुवासचन्द्र नेम्वाङज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु,
खानेपानीको व्यवस्था पनि यहाँ भएको छ । संचार सुविधा आइसकेको छ । अनलाइन क्लास चल्नेसमेत स्थिति भएको छ । टुजी सेवालाई छिट्टै फोरजी सेवामा स्तरोन्नति गरी संचालन गर्ने साथीहरुले भन्नुभएको छ । जेहोस् फोरजी सेवा पनि संचालन हुँदैछ । अब यहाँ मोटरेवल बाटोले जोड्ने कुरा टिपताला पास र उता दक्षिणमा…आउँछ । त्यहाँ जोड्ने कार्य भइरहेको छ । चीनतिर पनि बाटो खुलिसकेको छ । यता हाम्रोपट्टि पनि ट्रयाक खोल्न ६ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ, अरु खुलिसकेको छ । यसलाई स्तरोेन्नति गर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम तीन वर्षभित्रै सकिन्छ । त्यसपछि ब्ल्याकड्रप (कालोपत्रे) गर्ने काम हुन्छ । तीन वर्षभित्र यी सुगम ठाउँहरु हुन्छन् ।
सरकारका तर्फबाट गर्ने कामको हकमा, मुख्य रुपमा यहाँ बाटो र विद्युतको स्तरोन्नति गर्ने माग साथीहरुले यहाँ ज्ञापनपत्रमा राख्नुभएको छ र नियन्त्रित क्षेत्र हटाउनु पर्ने कुराहरु राख्नुभएको छ । र, यसले पर्यटनका लागि सजिलो बनाउने छ । रेष्टिक्टेड एरिया भनेर मान्छेहरु आवतजावत गर्न नदिने खालको स्थिति जुन छ, यसलाई हटाएर यस क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय आकर्षणको विशेष क्षेत्र बनाउनुपरेको छ । जब यो बेसक्याम जाने बाटोका रुपमा छ भने यसलाई पर्यटकीय गतिविधि निर्वाध रुपमा गर्न नदिनु पर्ने वा रेष्टिक्टेड एरिया बनाउनुपर्ने त्यस्तो धेरै आवश्यकता छजस्तो लाग्दैन । यस सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले प्रस्ताव बनाएर अगाडि बढाउनुहुनेछ र मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेर यहाँको आवागमन सहज बनाउने, यहाँ हेलिकोप्टर आदि आउने कुरालाई पनि सहज बनाउने र पर्यटकहरु आउने कुरालाई पनि सहज बनाउने काम गरिने छ । ती कामहरु हामी छिट्टै गर्छौं । अहिलेको समयमा धेरै कुराहरुलाई रेष्टिक्टेड गरिरहनुपर्ने वा नियन्त्रित गरिराख्नुपर्ने जरुरी छैन ।
यहाँ साथीहरुले राख्नुभएका मागहरुको सन्दर्भमा तिपताला नाका खोल्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्नुभएको छ । यो कुरा मैले अघि नै भनेँ, यसमा हामीले ध्यान दिने नै छौं । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलाई कालोपत्रेमा परिणत गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । त्यो पनि प्रक्रियामै छ । त्यो हुने नै छ । गाउँपालिकामा रहेका एनटिसी टुजी टावरलाई फोरजीमा परिणत गरिदिन भन्नुभएको छ, त्यस सम्बन्धमा पनि काम अगाडि बढिराखेको छ । कञ्चनजंगा बेसक्याम्पको दक्षिणी र उत्तरी मोहडाका क्षेत्रहरुमा अवस्थित पर्यटन पदमार्गमा स्तरोन्नति गरिदिन भन्नुभएको छ । यसलाई पनि ध्यान दिइनेछ । यस पर्यटन पदमार्गलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? पहिले मोटरेवल बाटो आयो भने यसको स्तरोन्नति गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसकारण मोटरेवल बाटो ल्याउने कुरामा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।
त्यसले सबै कुरालाई सजिलो बनाउँदै जानेछ । साथीहरुले अर्को माग गर्नुभएको छ, यो स्पेसल परमिटको अनिवार्यताचाहिँ खारेज गर्नुप¥यो । यस सम्बन्धमा पनि मैले भनिसकें, अबको समयमा यस खालको व्यवस्था धेरै आवश्यक पर्दैन । र, यसलाई खारेज गर्न सकिन्छ । यो उहिलेको जमानाको कुरा हो । अहिले यस्तो अवस्था आवश्यक छैन । लघु जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बृद्धि गरेर खम्बाचेन, ग्याब्ला र अम्जिलासाजस्ता गाउँहरुमा पनि विस्तार गरिदिन भन्नुभएको छ । यो एकदम स्वभाविक र आवश्यक कुरा हो । यसमा हाम्रो ध्यान जानेछ । तपाईंहरुले लेखेर दिनुभएका यी मागहरु लगेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुबाट फरवार्ड गर्ने र के गर्न सकिन्छ ? यो काम हामीले गर्नेछौं ।
नेपालमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संघीय लोेकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्बन्धमा कसैले भ्रम फिजाउनु बेकार छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । हामीले यो लडेर ल्याएका छौं । यसको सुदृढीकरणका लागि, यसको सफल प्रयोगका लागि नै हामी काम गछौं । तसर्थः तपाईंहरु ढुक्क भएर विकासका कामहरुलाई साथ दिन लाग्नुहोस् । हामी देश विकासलाई अगाडि बढाउन सरकार दत्तचित्त छौं । मलाई काठमाडौं मात्रै बसेँ पनि पुग्थ्यो, यहाँ नआएपनि पुग्थ्यो । अस्ति भर्खर म किमाथाङ्का गएँ । बाटो कस्तो बन्दैछ, कसरी बन्दैछ, के हुँदैँछ ? चीनसँगको त्यो हाम्रो यस्तो अर्को नाका हो, जो धेरै उचाइमा जानुपर्दैन र थोरै उचाइमा सधै चल्नसक्छ । यस्तै २३÷२४ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । त्यति कम उचाइको सधैँ चल्ने बाटो किमाथाङ्का करिडर अरुण नदीको किनारैकिनार बनिरहेको छ । हामी तमोर नदीको किनारैकिनार अर्को बाटो पनि खोल्दै छौं । पश्चिमतिरबाट पनि थुप्रै नाकाहरु खोल्दै छौं । त्यसकारण उत्तरी भेगका गाउँहरु पनि अब दुर्गम होइनन् ।
मैले सरकारलाई गलत बाटोमा जान दिन्न । देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, स्थायित्व र स्थिरताको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा नै यस देशलाई अगाडि बढाउने काम हुन्छ । त्यसहिसाबले कसरी बढाउनुपर्छ ? त्यसमा नै सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । म दत्तचित्त भएर लागेको छु । हामी विभिन्न ठाउँमा गएर, विभिन्न ठाउँका अवस्थाहरु कस्ता छन्, त्यहाँको विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर हेरिरहेका छौं । म तपाईंहरुलाई ढुक्क भएर विकास निर्माणको काम र उन्नति प्रगतिको काममा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।
म हाम्रा युवाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुले सही बाटो लिनुपर्दछ । विकासको बाटो लिनुपर्दछ । आ–आफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने ? कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ ? एउटा नमूना त हाम्रो याङजुङ शेर्पा नै हुनुहुन्छ, जसले यस दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर यस ठाउँको विकासको लागि फाउन्डेसन निर्माण गरेर विभिन्न ढंगले काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ । मलाई आज अलिक माइत आएजस्तोजस्तो पनि लागिरहेको छ । कोेसेली दिएर पठाउन खोजेकोजस्तो देख्छु । तर यो फेरिफेरि आइरहोस् भनेर हो कि के हो ? हामीहरुलाई यस्ता कोसेलीहरु धेरै नदिए राम्रो हुन्थ्यो, धेरै कोसेली नदिए नै राम्रो हुन्थ्यो, उता बस्न मन नलागेर फेरिफेरि आइरहुँजस्तो लागिरह्यो भने….। त्यसैले कोसेलीहरु अलि धेरै नदिए हुन्थ्यो । खैर, म सबै साथीहरुलाई धेरैधेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुकोे ल्होसारजस्ता चाडहरुको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।
म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । दिन छोटा छन् । तपाईंहरुले डकुमेन्ट्री बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ, डकुमेन्ट्री राम्रो बनोस् । त्यसले घुन्सालाई चिनाओस् । घुन्सालाई नेपालभरि र विश्वभरी नै प्रचार गरोस् । हामीहरु यहाँको भ्रमणमा आयौं, घुन्साले प्रचार त पायो नै । अब नेपालभरिका जनताले घुन्साको बारेमा थाहा पाउँछन्, धेरै राम्ररी थाहा पाउँछन् । टेलिभिजनहरुले प्रशारण गर्छन्, यूटुुबले प्रशारण गर्छन्, अरुले पनि प्रसारण गर्छ । तपाईंहरुको यो सुन्दर मनोरम ठाउँ र यसको प्रचार सबैले गर्छन् । हो, यो ठाउँ अलिकति दुर्गम ठाउँ हो । यो ठाउँमा आउँदा विकासप्रेमी योजनविद् डा.हर्क गुरुङजी र नेपालको विकासमा साह्रै रुचि राख्ने फिनल्याण्डका त्यसबेलाका कार्यवाहक राजदूत मुत्सुनेनलगायतका साथीहरुको यहाँ भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमेको थियो । त्यो अत्यन्तै दुःखको कुरा थियो । यो अलिक जोखिमपूर्ण भूगोल छ ।
भरसक राम्रो मौसम भएको बेला मात्रै आउने र यहाँ आउन हेलिकोप्टरबाट उड्ने गर्नुपर्छ । नत्रभने यो बाटो बनेपछि हेलिकोप्टरबाट धेरै आइरहनुपर्दैन । मान्छेहरु बाटोबाटै आउनजान सक्छन् र दुर्घटना पनि कम हुने स्थिति बन्छ । मौसमको खराबी कारणले दुर्घटना कम हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस घडीमा खासमा आज घुन्सा आएको बेलामा म डा. हर्क गुरुङ, तत्कालीन बन राज्यमन्त्री गोपाल राई र फिनल्याण्डका हाम्रा मित्र मुत्सुनेनसमेतका सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरुप्रति श्रद्धासुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु । यस ठाउँको विकासलाई ध्यानमा राखेर नै उहाँहरु यहाँसम्म आउनु भएको थियो । अब मैले धेरै समय नलिऔं, हामीलाई छिटो फर्किनुपर्ने छ । त्यसकारण म फेरि सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु । सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ यहीँ टुंग्याउँछु ।
धन्यवाद ।-प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्सामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ